आईपिएल: चेन्नाई र बैंगलोर दुवै टिमबाट खेलेका ३ चर्चित खेलाडी – WicketNepal
आईपिएल: चेन्नाई र बैंगलोर दुवै टिमबाट खेलेका ३ चर्चित खेलाडी
Sakar Sedhain, २०७७ भाद्र १४, आईतवार १९:४५
भारतिय पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको नेतृत्वमा रहेको चेन्नाई सुपर किंग्स आईपिएल इतिहासकै एक सफल टिम हो। चेन्नाईले तिन पटक आईपिएल उपाधी जितेको छ। अर्कोतर्फ वर्तमान भारतीय कप्तान बिराट कोहलीको नेतृत्वमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले भने हालसम्म उपाधि चुम्न सकेको छैन।
धोनीले आईपिएलको सुरुवाती सिजन देखिनै चेन्नाईको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। आईपिएल मात्र नभई विश्व क्रिकेटकै सफल कप्तान धोनी आफ्नो चतुर कप्तानीको लागि चिनेने गर्छन्। २०१३ मा बैंगलोरको कप्तान बनेका बिराटले सुरुवाती सिजन देखि बैंगलोरको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। टिमलाई उपाधी जिताउन असफल रहेता पनि उनले बैंगलोरलाई २ पटक आईपिएलको प्ले अफसम्म (फाइनल एक पटक) डोर्याउन सफल भएका छन्।
दुई सफल खेलाडीको कप्तानीमा खेल्नु सबै खेलाडीको सपना हुन्छ। तर, थोरै भाग्यशाली खेलाडीले मात्र धोनी र कोहलीको नेतृत्वमा खेल्न पाएका छन्। दुबै टिमको प्रतिनिधित्व गरेका ३ चर्चित खेलाडीहरुको बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ:-
३. एल्बी मोर्केल
दक्षिण अफ्रिकी पूर्व अल-राउण्डर एल्बी मोर्केलले आईपिएलमा ४ टिमको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। उनले आफ्नो आईपिएल करिअर चेन्नाईबाट सुरु गरेका थिए। मोर्केलले सिएसकेको लागि ७० भन्दा बढी खेल खेलेका छन्। आईपिएलको सुरुवाती सिजनमै सिएसकेसँग आबद्ध भएका मोर्केलले सिएसकेको लागि ६ सिजन खेल्ने क्रममा थुप्रै सफलता हाँसिल गरेका थिए।
२०१२ को अप्रिल १२ मा चेन्नाईको लागि खेल्दै उनले बैंगलोर विरुद्ध बिराट कोहलीको एकै ओभरमा २८ रन प्रहार गर्दै अप्रत्याशित जित दिलाएका थिए।। त्यसपश्चात, मोर्केल थप चर्चामा आएका थिए। बैंगलोरले मोर्केललाई भारु २ करोड ४० लाख खर्चेर टिममा भित्र्याएको थियो। २०१५ को सिजनमा बैंगलोरमा आबद्ध भएका मोर्केलले १ सिजन मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा मात्र ७ खेल खेले। उनको प्रदर्शन पनि सन्तोषजनक रहेको थिएन।
उनले चेन्नाई र बैंगलोर बाहेक देल्ली डेयरडेभिल्स र राइजिङ पुने सुपर जायन्ट्सको प्रतिनिधित्व पनि गरिसकेका छन्।
२. ब्रेन्डन म्याकलम
न्युजिल्यान्डका पुर्व कप्तान ब्रेन्डन म्याकलम टि-२० फर्म्याटमा विस्फोटक ओपनिङ ब्याट्सम्यानको रुपले चिनिन्थे।
उनले आइपिएल करिअर २ पटकको लिग विजेता कोलकाता नाइट राइडर्सबाट सुरुवात गरेका थिए। आईपिएलको सुरुवाती सिजनमा कोलकाताको प्रतिनिधित्व गरेका उनले ४ सिजन कोलकातामा बिताए। त्यसपश्चात २०१४ को सिजनमा उनलाई धोनीको नेतृत्वमा रहेको चेन्नाईले अनुबन्ध गरेको थियो। उनले चेन्नाइमा रहदा ड्वेन स्मिथसँग राम्रो ओपनिङ साझेदारी गर्थे। चेन्नाइमा रहदा थुप्रै सफलता हात पारेका थिए म्याकलमको प्रदर्शन राम्रो रहेको थियो।
म्याकलमले केबल २ सिजन चेन्नाईमा बिताए। २०१८ मा बैंगलोरले म्याकलमलाई अनुबन्धित गर्यो। तर, उनले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। उनले आरसिबीको लागि मात्र ६ खेल खेल्न पाए। उनले त्यसपछि क्रिकेटबाट बिदाई लिए र हाल आईपिएलमा कोलकाताको मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा रहेका छन्।
१. पार्थिव पटेल
विकेटकिपर ओपनिंग ब्याट्सम्यान पार्थिव पटेलले आईपिएलमा ६ टिमको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। मोर्केल जस्तै पटेलले पनि सुरुवात चेन्नाईबाट गरेका थिए जहाँ २ सिजन खेले।
चेन्नाईबाट बिदा भएपछि उनले डेकन चार्जर्स (२०१२) र सनराइजर्स हौदराबाद (२०१३) को प्रतिनिधित्व गरे। पटेल २०१४ मा बैंगलोरमा अनुबन्धित भएका थिए। केबल १ सिजन आरसिबीबाट खेलेका पटेल २०१५ मा मुम्बई इन्डियन्समा सामेल भए। मुम्बईमा दुई सिजन बिताएका पटेल २०१७ मा पुन एकपटक आरसिबीमा अनुबन्धित भए। २०१७ यता उनी आरसिबीकै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्।
मोर्केल, म्याकलम र पटेल तिनजना खेलाडीहरु चेन्नाइको प्रतिनिधित्व गरेपछि आरसिबीमा आबद्ध भएका थिए।
CPL : सेन्ट किट्स बिरुद्ध जितमा सन्दिपको २ विकेट, अंकतालिकामा उक्लियो जमैका